programming Archives - Saturngod
Posted on Updated February 28, 2019 February 28, 2019 by saturngod
Programming Basic စာအုပ်က အကုန်လုံး ရေးပြီးသွားပြီ။ ထပ်ဖြည့်ထားတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ပြန်ပြင်ထားတာတွေလည်း ပါတယ်။ အခု စာလုံးပေါင်း ပြန်စစ်တာရယ် နောက်ပြီးတော့ code တွေ ရှင်းပြထားတာတွေ ကိုယ်တိုင် ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး နားလည် မလွယ်ပြန်စစ်နေတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ စာအုပ် ထုတ်ဖို့ အထိ လုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားတယ်။ ebook အနေနဲ့ ဖတ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အောက်က link မှာ download ချလို့ရပါတယ်။ https://cldup.com/fMPFtlzkeT.pdf
Basic Programming Chapter4Done
Basic Programming စာအုပ်ကို ဆက်မရေးဖြစ်တာ အတော်ကြာနေတာနဲ့ ဒီ အပတ်တော့ Chapter4ကို ပြီးအောင် ရေးဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး Chapter 10 ခု လောက် ထည့်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ Chapter အလိုက် ခေါင်းစဉ်တွေ ခွဲပြီးတော့ ထည့်ထားပါတယ်။ အဓိကတော့ အခြား Programming စာအုပ်တွေလို programming language ကို သင်တာ မဟုတ်ပဲ logic အကြောင်းကို အဓိက ရေးချင်လို့ Data Structure ပိုင်းကို အဓိက ထားပြီး ခေါင်းစဉ်ကို ခွဲထုတ်ထားပါတယ်။ အပြင်မှာ programming ကို တတ်ရင် language ပိုင်းကို သိနိုင်ပေမယ့် Data Structure ပိုင်းတွေ အားနည်းနိုင်တယ်။ […]
Update Programming Basic Book
Posted on Updated April 23, 2015 by saturngod
ဒီနေ့ programming အခြေခံ စာအုပ်ကို ထပ်ပြီးတော့ update လုပ်ထားပါတယ်။ Changes Update Install Python3at Chapter 1 Update Mod operator at Chapter 1 Finish calculator at Chapter2Update Looping at Chapter2Update Array at Chapter2Add Quiz , Questions at Looping Add Answer section at Chapter2How to Install Python3Chapter 1 […]
Posted on Updated October 31, 2014 by saturngod
Web Route ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော် ပုံလေး တစ်ခု ဖန်တီးခဲ့ဖူးတယ်။ Web Developer ဖြစ်ချင်တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ HTML , CSS ပြီးရင် ဘာတွေ လေ့လာရမယ်။ ဘာတွေ လေ့လာလို့ ရမယ် စတာတွေကို ပုံ တစ်ပုံတည်းနဲ့ ကြည့်ပြီး နားလည်အောင် ဖန်တီးထားတာပါ။ ဖန်တီးထားခဲ့တာက ၂၀၁၂ လောက်က ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်နဲ့ အခု အချိန် Technology တွေ မတူညီတော့ပါဘူး။ Node.js ဟာ အားကောင်းလာပြီး framework တွေ အများကြီး ရှိလာသလို Go lang ဟာ လည်း တကယ်ကောင်းတဲ့ framework တွေ ရှိလာပြီ။ နောက်ပြီးတော့ […]
VB6 suck ?
Posted on Updated September 27, 2010 September 27, 2010 by saturngod
မနေ့က အောင်စည်သူနဲ့ Food court မှာ စကားပြောဖြစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း computer သမားဆိုတော့ စကားပြောတော့ computer အကြောင်းရောက်သွားတယ်။ သူက ပြောတယ် သူ VB6 လုပ်လိုက်တာ အချိန် တော်တော်ကုန်သွားပြီး C++ ကို မလုပ်မိလိုက်တာ မှားသွားတယ်ပေါ့။ VB6 နဲ့ သူ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Project အကြောင်းလေးလည်း ပြောဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ကကော …. အင်း.. ကျွန်တော်လည်း VB6နဲ့ ၂ နှစ်လောက် အချိန်ကုန်သွားတယ်။ UCSY ကျေးဇူးနဲ့ C++ ကို စပြီး သိခဲ့ရတာ။ နောက်မို့ဆို သိဖြစ်မယ်မထင်။ အခု အချိန်ထိ လေ့လာဘူးတဲ့ language တွေထဲမှာ VB6 နဲ့ […]